URamoreboli ujabule ngokuqala ngewini kwiBafana
July 7, 2021 July 7, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi obambile kwiBafana Bafana, uMorena Ramoreboli, ujabulile ngendlela iqembu eliqale ngayo kwiCosafa Cup ka-2021. IBafana ishaye iBotswana ngo 1-0 emdlalweni obuseNelson Mandela Bay Stadium, eGqeberha, ngoLwesibili ntambama.
IBafana beyishisa ibuye ibande kulo mdlalo, kanti beyikuhlonipha nokukhahlelela ipali uma sekufanele yenze lokho. Nokho uRamoreboli, okunguyena ohola iBafana njengoba uHelman Mkhalele egonqile kulandela ukutholakala eneCoronavirus, uzwakalise ukweneliseka ngendlela abadlale ngayo.
Igoli okuwine ngalo iBafana lishaywe uKagiso Malinga ngomzuzu ka-67. IZebras ayizange isabuya yize kuyiyona ebisihlasela ngasekupheleni komdlalo.
“Ukuqala kahle kulo mqhudelwano bekunganele, bekumele sidlale ibhola elihle. Ngicabanga ukuthi sidlale umdlalo obubukeka kahle kakhulu. Sizamile ukuqinisekisa ukuthi sibampintshele ekhoneni kukho konke ebesikwenza, ikakhulukazi uma ibhola lingekho kithi,” kusho uRamoreboli kwi-eNCA.
“Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo uma ngikhuluma iqiniso. Kumayelana nokulungiselela umdlalo ozayo, sizibeke phansi, sizithobe. Kumele sizame ukuqinisekisa ukuthi sisebenza ngokuzimisela okukhulu kunakuqala, ukuze sithole umphumela omuhle emdlalweni olandelayo.”
Kuzomele ibhukule impela iBafana ngoba emdlalweni olandelayo izobhekana ne-Eswatini ngoLwesine ntambama. Leli qembu ngeke lithathwe kancane, ikakhulukazi ngemuva kokubhambabula iLesotho ngo 3-1 emdlalweni wokuqala.
FUNDA NALA: IChiefs ihlome ngoMshini omncanyana kodwa oyingozi
Ukuwina kanje kweSwatini kwenze kwaba iyona ehlala esicongweni eqoqweni layo ngoba ishaye amagoli amaningi. Iqembu elizowina kusasa phakathi kweNingizimu Afrika neSwatini, yilona elizozibeka ethubeni elingcono lokudlulela emzuliswaneni olandelayo yize izobe ingakadlalwa imidlalo yokugcina.
Emidlalweni edlalwe ngoLwesithathu, iMozambique ibambane neZimbabwe ngo 0-0, kwathi iNamibia yashaya iSenegal ngo 2-1.
Previous Previous post: UMshini yisikhali seChiefs esincanyana kodwa esiyingozi
Next Next post: USouthgate akafuni kujatshulwe kusaphakwa e-England